घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » यदि यो तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्! » पोर्टो रिको पर्यटन अब फस्टाउँदै छ
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु को डाटा को अनुसार, पोर्टो रिको अक्टोबर १ of सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका मा कोरोनाभाइरस बिरूद्ध खोप लगाएका मानिसहरु को उच्चतम प्रतिशत छ। के यही कारणले यहाँ पर्यटन फस्टाएको छ?
युएस ट्राभल एसोसिएशन को रिकभरी ड्यासबोर्ड पर्यटन अर्थशास्त्र बाट डाटा संग प्यूर्टो रिको रिकभरी मा नेता को रूप मा हाइलाइट गर्दछ। जब मासिक खर्च तुलना, औसत मा, अमेरिका लगभग ११% दुई बर्ष पहिले सेप्टेम्बर मा एकै समय तल थियो। तर प्यूर्टो रिको मा यात्रा खर्च २३% भन्दा धेरै त्यो अंक भन्दा माथि थियो। जबकि आठ अमेरिकी राज्यहरु २०१ above मा आगन्तुक खर्च स्तर देखीरहेका छन्, ती १% र%% को बीचमा छन् जबकि प्यूर्टो रिकोको आगन्तुक खर्च २% पहिले दुई बर्ष भन्दा बढी थियो।
सीडीसी डाटा अनुसार, प्यूर्टो रिकोको ३३.३ मिलियन जनसंख्याको एक स्वस्थ %३% लाई भाइरस बिरुद्ध पूर्ण रुपमा टीका लगाइएको छ। अमेरिकी क्षेत्र मा अमेरिका मा सबैभन्दा कम COVID सामुदायिक प्रसारण दरहरु मध्ये एक छ, मात्र १ seven पुष्टि भएका केसहरु बिगत सात दिनहरुमा १०,००,००० बासिन्दाहरु बीच।
यी सकारात्मक प्रवृत्तिहरु द्वीप को यात्रा niches लिफ्ट, कम से कम जो गोल्फ हो। प्यूर्टो रिको को 18 पाठ्यक्रमहरु, समुद्र तटहरु, र अन्य उष्णकटिबंधीय बृद्धि स्थानहरु पतन र जाडो को समयमा विश्राम र कायाकल्प को लागी आदर्श हो, जब तापमान 80s मा औसत।
गोल्फ महामारी को समयमा प्यूर्टो रिको मा समृद्धि छ, निहित सुरक्षितता र सामाजिक दुरी खेल र टापु मा पाईन्छ बाट उत्पन्न। पाठ्यक्रमहरु लक्जरी देखि नगरपालिका सम्म दायरा, स्यान जुआन को नजिकै धेरै संग प्यूर्टो रिको भर मा फैलियो। Oceanside दृश्यहरु, नारियल को रूखहरु, र वर्षावन भिस्टा आफ्नो सेटिंग्स फ्रेम। मूल्य अंक, भूभाग, लेआउट शैली, र सम्बन्धित सुविधाहरु विविध र पूरक हुन्।
द्वीप क्यारिबियन को हवाई केन्द्र हो। थप यात्री मित्रता प्यूर्टो रिको द्विभाषी संस्कृति, अमेरिकी मुद्रा, र अमेरिकी नागरिकहरु को लागी कुनै पासपोर्ट आवश्यक पाईन्छ।